Dagaal khasaare geystay oo maanta Boosaaso ku dhexmaray ciidamada Puntland iyo Daacish | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dagaal khasaare geystay oo maanta Boosaaso ku dhexmaray ciidamada Puntland iyo Daacish
Boosaaso (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari, ayaa waxa ay sheegayaan, in iska hor-imaad khasaare geystay uu duhurkii maanta dhexmaray kooxo hubaysan iyo Ciidamo ka tirsan amniga magaalada Boosaaso.
Waxaa la xaqiijiyay in hal askari oo ciidanka PSF ah iyo xubin ka tirsan maleeshiyaadka Daacish, ay ku dhinteen iska hor-imaadkaas.
Wararka ayaa sheegaya, in nolosha lagu qabtay xubin kale oo ka tirsan Daacish, kadib markii uu dhaawacmay.
Kooxda hubaysan oo ka tirsan Daacish, ayaa bartamaha magaalada Boosaaso ku weeraray askar ka tirsan Ciidanka PSF ee Puntland, waxaana halkaasi ka dhacay iska hor-imaad kooban oo khasaare dhimasho iyo dhaawac sababay, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ciidan.
Sidoo kale, ciidanka PSF ayaa gacanta ku dhigay hub iyo agab kale, oo ay wateen kooxda Argagixisada Daacish, kuwaas oo ay ku jiraan qaraxyo ay doonayeen in ay ka fuliyaan gudaha magaalada Boosaaso.
Ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku hayo gaari laga soo dajiyay hub kala duwan oo la sheegay inay wateen dableyda ka tirsan Daacish.
Dagaal dhexmaray Ciidamada Puntland